Siyaasiyiinta Goboladda Waqooyi oo heshiis ka gaaray Doorashada - Bulsho News
Banaanbax looga soo horjeedo Fahad iyo Farmaajo oo Muqdisho ka...
Maxay ku kala duwan yihiin go’aanada ay kala qaateen FARMAAJO...
Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi ee Somaliland ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii u dhaxeeyay ee ku saabsan Guddiga maamulaya doorashooyinka Xildhibaanada Waqooyi.
Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi C/laahi iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed ayaa heshiis ku gaaray in khilaafkii la xaliyo isla markaana la guda galo Doorashooyinka kuraasta Gobolada Waqooyi.
Qodobada la isku afgartay waxaa kamid ah in la isku dhafo guddiga Maamulaya doorashada Gudoomiye kuxigeen iyo Madaxa amniga la siiyo Gudoomiye Cabdi Xaashi si wadajir ahna ay uga wada shaqeeyaan doorashada.
Hoos ka akhriso heshiiska
by 55 mins ago 55 mins ago
Maxay Ka Wada Hadleen RW Rooble Iyo Wasiirka...
The Tiger who came for free: Falcao is...
Damaca iyo dagaal ka dhex qarxay madax goboleedyada...
Donny Van de Beek Oo Laga Badbaadinayo Kaydka...
Wararkii ugu dambeeyey doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare...
Muran Dhamaaday: MESSI VS RONALDO? Ciyaar Gacmeedka FIFA...
Xasaradda doorashada Somalia: Fursad lagu heli karo dimuquraadiyad...
Nin kaligii ku guuleystay inuu Al-Shabaab kaso xareeyo...
Inter serve up a storm as Inzaghi looks...
Afghanistan: Saddex sabab oo Shiinaha uu ku taageeri...
Cesar Azpilicueta Oo Shaaciyay Sababtii Ka Dambaysay Guuldaradii...
Cunaqabateynta Maraykanka kusoo rogayo Itoobiya & Eriterea
Weeraradii 9/11 : Daqiiqad-daqiiqad sidii ay u dheceen...